Sidee baad u raadin kartaa Amazon keywords keywords saameyn ku yeelashada liiska?
Maaha wax ku filan inaad haysato alaabo wax ku ool ah oo lagu iibiyo Amazon. Waxaad u baahan tahay inaad ka dhigto sheygan u muuqata macaamiishaada suurtagalka ah. Hawl-galinta istiraatiijiyeynta oo dhan waa in ay ku bilawdo cilmi-baarista keywords. Waxay ka caawisaa inay ka faaiidaystaan ​​kuwa aadka u tartamaya oo ka sii fiican iibinta - free truck valuation. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa in la hagaajiyo liiskaaga iyadoo la adeegsanayo shuruudaha raadinta ee lagu beegsado iyo kuwa sare. Haddii aad dhawaan sameysey ganacsigaaga, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho mudo dheer oo aan ku qorneyn ereyo muhiim ah. Isticmaalida iyaga, waxaad gaari kartaa darajada ugu sarreysa ee nuucyada badan. Ereyada waxay u adeegaan sida mashiinka mashiinka mashiinka raadiyaha ah si aad boggaaga wax ugu iibsato. Taasi waa sababta ay ugu baahan yihiin inay noqdaan kuwo ugu muhiimsan. Si aad u hesho ereyada muhiimka ah, waxaad u baahan tahay inaad sameysid cilmi-baarista suuqa oo aad baadho dabeecada qofka.
Waxaa jira laba siyaabood oo suurtagal ah in la raadiyo ereyada muhiimka ah ee loogu talagalay soo-saarka Amazon - buug iyo qori. Midka ugu dambeeya waa doorka ugu wanaagsan ee ganacsatada internetka ee hanta leh ee aan haysan waqti badan oo lacag la'aan ah si loogu isticmaalo baaritaan joogto ah suuqa.
Haddii aad ku faraxsan tahay inaad isticmaasho mid ka mid ah qalabka cilmi baarista, waxaad heli doontaa liiska ugu fiican ee keywords ganacsigaaga oo ku saleysan cilmi-baarista dabeecadaha macaamiisha Amazon muddo gaaban (in ka yar saacad). Si aad u hesho ereyada ugu muhiimsan ee la beegsanayo, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho shaandhooyin gaar ah oo aad tixgelisid doorbidka macaamiishaada iyo sidoo kale jinsigooda, da'da ama joqoraafiga. Waxaa intaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad falanqayso mugga raadinta ee erey kasta oo la raadinayo. Calaamadee ereyada muhiimka ah ee liiska laga helay liistada iyo kuwa aan qiimeeynin. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso waxqabadka erey-raadin kasta inta lagu jiro bisha ugu dambeysa. Haddii aad jeclaan lahayd inaad abuurto olole xayeysiis ah, waa inaad sidoo kale eegtaa qiimaha riixa mid kasta oo ka mid ah ereyada muhiimka ah ee aad rabto inaad ku daro.
In this article, waxaan ka wada hadli doonaa qaar ka mid ah nidaamka ranking Amazon iyo qalabka loo isticmaalo si loo isticmaalo darajo sheyga on bogga natiijada raadinta ee Amazon.
Mabaadii'da darajada iibka Amazon
Ka hor intaanan helin falanqaynta qalabka cilmi-baarista, fadlan aan ka wada hadalno sida algorithm search
Amazon waxay isticmaashaa noocyo kala duwan oo algorithms ah iyo jaangooyooyin si ay u muujiyaan dadka isticmaala oo kaliya waxyaabahaas ay u badan tahay inay dalbanayaan waxay raadiyaan dhamaan tallaabooyinka isticmaale ee goobta oo ay ku jiraan iibsiyadii hore, rabitaanka, rabitaanka, iyo wixii la mid ah. Qalabka liiska loo yaqaan "A9" wuxuu u adeegaa dadka isticmaala talooyinka ugu fiican ee goobta ku yaala.Xukuumad kasta oo Amazon ah waxay soo bandhigtaa sheekada SERP bogeeda iyadoo ku xiran baahidiisa iyo waayo-aragnimadii hore ee mashruucan ganacsiga Marka Amazon uu helo fariin cad oo ah baahiyaha iyo doorbidiisa, Amazon waxa ay si toos ah u soo bandhigeysaa natiijooyinka raadinta iyadoo lagu saleynayo falanqaynta macaamiisha qaddarinta.
Tilmaamo si loo sameeyo cilmi-baarista Amazon
Waxaa jira laba nooc oo Amazon Keyword Tool - lacag la'aan ah oo la bixiyo. Labada iyaga ayaa faa'iido u leh ganacsigaaga. Si kastaba ha ahaatee, lacagta la bixiyay waxay bixisaa celcelis ahaan laba jeer ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah marka la barbar dhigo nooca bilaashka ah.
Aynu hadalno qaar ka mid ah ereyada sida ay u shaqeyso. Waxaad ku qortaa luuqada muhiimka ah ee muhiimka ah ee ku jira sanduuqa raadinta keyword-ka oo dooro waaxda aad jeceshahay inaad kor u qaaddo alaabtaada (F.e. Apps iyo Games, ama Dharka). Markaas waxaad u baahan tahay inaad dooratid waddanka aad jeceshahay inaad kor u qaaddo alaabtaada iyo ugu dambeyntii luqad. Waxay qaadataa dhowr daqiiqo (illaa 10) inta nidaamku qaabeynayo codsigaaga. Intaas ka dib, waxaad heli doontaa liiska erayada muhiimka ah ee la xidhiidha boqollaalka dhererka dheeraadka ah ee ku salaysan erayada Amazon.